Pịa 1 Ọ bụrụ na I nwere mmefu ego | Martech Zone
Tọzdee, Ọktoba 22, 2009 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Di na nwunye ole na ole gara aga, echetara m mgbe onye na-ede blọgụ were Ihe otiti na Onye na-ede blọgụ kpọrọ Scoble na ihe omume ya wee kwue mgbe Scoble rịọrọ njem na mmefu ga-akwụ ụgwọ. Scoble zaghachikwara n'ịntanetị, ma rụọ nnukwu ọrụ na ya.
Izu a abụwo izu siri ike (mana ọ na-atọ ụtọ). Enwere m Isi maka akwụkwọ m, m na-emezue ọrụ 2, ma m ka na-arụ ọrụ na ndị ahịa chọrọ. Ana m emetụ ọtụtụ ndị mmadụ aka kwa izu site na ekwentị, email, Twitter, Facebook, Plaxo… wdg, wdg. .
Atụmanya ahụ bụ maka m kpatara - m gaara na-enyocha ụlọ ọrụ ahụ nke ọma. Agbanyeghị, ndị na - agụ ya bụ akụkọ ọzọ. Enwetara m oku ebe nwanyị ahụ kwuru,
Kedu ihe gị na ya bụ ndị ịntanetị - ị naghị aza ekwentị, azakwala email… azaghachi!
Anaghị m arịọ mgbaghara. Kama, m gwara ya eziokwu. Enwere m ọ dịkarịa ala 20,000 ndị ọbịa ọhụụ kwa ọnwa na blọọgụ m, ikekwe ihe 250 kwuru (ọtụtụ bụ SPAM), yana ihe karịrị 100 arịrịọ. Arịrịọ abụghị arịrịọ maka ọrụ. Naanị ha bụ ndị na-agụ akwụkwọ na-achọ ndụmọdụ ma ọ bụ ozi ọzọ. M na-agbalị ijikwa ndị a site na blog posts. Adịghị m aza mgbe niile. N'ezie, anaghị m azakarị.
Nke a bụ ozi email nke m natara taa na isiokwu mgbe m dechara netwọkụ m ma rịọ maka nkwado ha na ntuli aka Blog Top 50 Indiana:
Edeela m ọtụtụ ozi n'ime blọọgụ gị wee zitere gị ọtụtụ DM dị iche iche na Twitter na-arịọ maka echiche gị, echiche na aro gị na usoro ahịa dijitalụ dị iche iche ma ọ dịbeghị mgbe m nwetara nzaghachi n'aka gị. N'ịghọta, amaara m na ị bụ nwoke ji ọrụ n'aka, na ịmalite ụlọ ọrụ ọhụrụ gị na ihe niile, ọ bụ ya mere na anaghị m ewere azịza gị n'onwe gị (n'agbanyeghị eziokwu ahụ Chris brogan, Bet Harte, Erik Deckers wdg .za azawo m ajụjụ mgbe niile).
Nke ahụ dị egwu na Chris, Beth na Erik enwewo ike ijide otu a! Anọ m ruo 3AM ma mezue nyocha na ịzaghachi email. Ana m atụ anya ndụmọdụ Chris, Bet na Erik na otu m ga - esi mee ka ọnụ ọgụgụ arịrịọ m nwetara.
Nyaahụ, anọ m na ogbako mpaghara ma ndị mmadụ 3 gbara m gburugburu… otu bụ onye otu, otu onye bụ onye na-azụ m ahịa, na otu bụ onye ahịa. Onye otu na onye nchịkwa ahịa ahụ kwara m emo mgbe ọ bụla m na-aza ekwentị ma ọ bụ ozi ịntanetị ha zitere m. Elere m onye ahịa m anya wee sị, “Ana m aza oku ekwentị gị na ozi ịntanetị gị?”. Ọ sịrị, “Ee,… mgbe niile… mgbe ụfọdụ n’etiti abalị! Echere m na ị na-arụ ọrụ awa 24 kwa ụbọchị. ”
N'oge ụfọdụ m kwenyere na web na folks dị ka Chris Anderson emeela mụ na azụmahịa m nnukwu nsogbu. Onye nwe ụlọ m, ndị m ji ụgwọ, ụlọ ọrụ m na ndị na-ere ahịa anaghị akwụ ụgwọ. N'ihi ya, enweghị m ike ịrụ ọrụ free. Aghaghị m itinye uche na:
ahịa - ndị a bụ ndị na-akwụ ụgwọ maka ngwaahịa na ọrụ m.
atụmanya - ndị a bụ ụlọ ọrụ nwere mmefu ego nke dị njikere ịghọ ndị ahịa.
Okwu nke Ọnụ Na-atụ Anya - ndị a bụ ụlọ ọrụ ndị netwọkụ m zigara m na ndị ahịa m maara na ụlọ ọrụ nwere mmefu ego ma dị njikere ịghọ ndị ahịa.
Arịrịọ ndị ọzọ - ndị a bụ ihe ọ bụla ọzọ… ozi ịntanetị, ụdị arịrịọ, oku ekwentị, wdg ndị a na-adapụ ndepụta m n'ihi na m na-arụ ọrụ na 1, 2 na 3.
Enwere m ohere dị iche iche n'ihi ụzọ a? Ikekwe - ọ bụ ya mere m ji enweta ịnye ọzụzọ ebe a na Indianapolis. Enweghị m elo ọ bụla. Ihe m maara bụ na "arịrịọ ndị ọzọ" nwere ike iwe m ọnwa iji nyochaa ma zaghachi… na enweghị m ike imeli ọnwa ole na ole na-eme nke ahụ.
Ndị na-agụ abụghị ndị ahịa. Ndị debanyere aha abụghị ọbụna ndị ahịa. Nke ahụ nwere ike ịdị njọ, mana ndị na - agụ akwụkwọ na ndị debanyere aha anaghị akwụ ụgwọ maka ndenye aha ha ma ọ bụ ozi sitere na blog a. Enweghị m nkwekọrịta nkwekọrịta ọ bụla na ndị na-agụ ma ọ bụ ndị debanyere aha.
Nke a blog bụghị a uru enterprise na m na-enweghị Internet nde mmadụ… anya site na ya. Otú ọ dị, m na-arụsi ọrụ ike iji nweta ya uru. Ozugbo blọọgụ ahụ kwụrụ ụgwọ m niile, obi ga-adị m ụtọ ịnọdụ ala kwa izu na-aza arịrịọ ndị na - agụ akwụkwọ m na ndị debanyere aha m. Ruo mgbe ahụ… Achọrọ m ịga ọrụ m ahịa.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịbụ onye ahịa, gụgharịa ajụjụ gị. Mụ na mmadụ kparịrị n'abalị ụnyaahụ na achọrọ m ịgbanwe ozi olu ọrụ m na steeti, "Pịa 1 ma ọ bụrụ na ị nwere mmefu ego!". Ya mere… ọ bụrụ na ị bụ onye na-agụ ma ọ bụ onye debanyere aha na ịchọrọ ndụmọdụ ndụmọdụ n'efu, biko ewela iwe mgbe m azaghị. Ana m arụsi ọrụ ike ịkwụ ụgwọ ndị ahụ!
Ọkt 22, 2009 na 3:41 PM
Ebe kachasị mma! Mụ na onye ọrụ ibe m na-enwe mkparịta ụka yiri nke a ụnyaahụ banyere mkpa ọ dị ịdị nkenke ma ọ naghị enweta ya ma mee mkpesa na anaghị m alaghachite ozi olu ya ngwa ngwa. Ajụrụ m ya ngwa ngwa m na-aza ozi ịntanetị ya ma kweta ngwa ngwa. Anyị niile kwesịrị ibute mmekọrịta anyị na usoro nke nkwukọrịta na ngwakọta nke ha abụọ. Ugbu a, ọ bụrụ na enwetaghị m nzaghachi onwe m na okwu a, Aga m und .ghọta kpamkpam.
Ọkt 22, 2009 na 4:15 PM
Daalụ! Ozugbo m nwere ike imeli onye nchịkwa maka blog na arịrịọ ndị a, m ga! 🙂 Ekele maka nkwado na nke a, enwere m ụjọ maka ịlaghachi azụ.
Ọkt 22, 2009 na 4:17 PM
Kedu ka m ga - esi wee zaghachi nnukwu okwu dịka nke a, Nick? Ikwuru eziokwu - onye na - ajụ ihe kacha arụ ọrụ bụ mgbe ụfọdụ ka a manyere anyị iji ya. Ọ ga-amasị m itinye ụbọchị niile n'ọmụmụ ihe na ekwentị, mana ọ naghị akwụ ụgwọ ahụ. Email dị nnọọ irè na-azọpụta m oge dị ukwuu kwa ụbọchị.
Ọkt 22, 2009 na 4:52 PM
Echere m na m lere blog a ka ọ bụ 'freebie'… ebe ntinye n'ime ọfụma ọrịre nke ndị na - ede blọgụ. Ọ bụrụ na ozi dị na saịtị ahụ adịghị ese foto niile - Ọ ga-amasị m iso ndị ọ bụla na-agụ akwụkwọ m rụọ ọrụ iji nweta ya n'ọkwa ọzọ!
Ọkt 22, 2009 na 4:53 PM
Dịka otu n'ime ndị ahịa gị, Doug, enwere m ike ịgba akaebe na ị na-elekọta ndị ahịa n'oge. Ọ dị mma na ọtụtụ ndị na - eji uche gị akpọrọ echiche (yana ha kwesiri), mana echere m na ị "ga - eweghachi" ọtụtụ ihe bara uru bara uru. Mgbe ụlọ ọrụ m na-akwụ ụgwọ maka ọrụ gị, ana m atụ anya ka elebara anya ozugbo. Ghaghị ịnapụta ma na nke a so n’ihe mere m ji aga n’ihu ịkwado gị. Site na ndị ahịa, ihe ndị ị na-ebute ụzọ bụ ntụpọ.
Ọkt 22, 2009 na 3:19 PM
Ọ dị ka ịkwesịrị iku m n'ọrụ dị ka onye enyemaka gị. Ọ bụ ezie na m ga-aza ndị mmadụ na ihe karịrị yikarịrị ga-ewetara gị na revenue m ga-o doro anya na mkpa ka a kwụọ ụgwọ maka ọrụ m 🙂 Na biakwa obibia nke ọhụrụ media / ahịa / mgbasa ozi na-abịa biakwa obibia nke free ndụmọdụ na ọrụ. Aga m ekwu nke a. Ọ bụrụ n’inweta ụdị nghọta ma ọ bụ ihe ọmụma dabere na ikwu ma ọ bụ email m ga-atụ anya na ị ga-aza onye ahụ. Amaara m na ị zara ụfọdụ n'ime ihe m kwuru na blọọgụ n'oge gara aga ka m mara na ị na-ege ntị ma zaghachi mgbe enwere ike. Akwa isi gburugburu.
Ọkt 22, 2009 na 4:22 PM
Doug ahurula m freebies zuru oke emere na nke a iji ghọta gripe gị ka ọ ghara ịla azụ ebe a. Amaghị m otú mmadụ ọ bụla ga-esi taa gị ụta maka ịkwụ ụgwọ ndị a. Ndị a bụ otu ndị ara na U2 maka ire ere site na ire ikike ha na ụlọ ọrụ wdg.
Ọkt 25, 2009 na 12:39 AM
Daalụ Bo! A bụ kediegwu ahịa. Enwere m mmasị na ị na-ewepụta oge iji zaghachi mgbe m mere ụdị ihe a.
Ọkt 25, 2009 na 12:43 AM
Yabụ na m na-eme nsogbu nye ndị na - agụ blọgụ a onye m wetaara afọ ofufo na afọ 4 gara aga? N'ezie?
My blog bụ maa a na-eduga generator ma na 30,000 ọbịa a ọnwa, olee otú ị gwa Abigel na m jikwaa na-ekwurịta okwu ọ bụla na-eru si? Ekwesịrị m iji usoro ntụpọ? Kedu usoro Kedu ihe anwansi anwansi?
Na-atụ anya ịnụ otu esi eme ya.
Ọkt 26, 2009 na 10:35 PM
A sị nnọọ na oge Doug nwere!
Ọkt 27, 2009 na 12:50 PM
Otu ihe ị na-efu, bụ na ị na-atọ ụtọ nke ukwuu. You na-enwetakarị iwe mgbe ndị enyi gị nyere gị nsogbu ..
Kpọrọ ihe, hụ post ahụ n'anya. Mgbe ị na-azụ ahịa nke kachasị enweghị atụ, ndị mmadụ na-eche na ọ dị mma ịrịọ maka enyemaka n'efu, ị na-abụkarị ndị na-emesapụ aka gbasara ịkekọrịta. Trickzọ a bụ ịmụ oge aga-ekwu, m ga-enwe ọ happyụ ịza nke ahụ n'ọgbakọ toro ogologo. Feegwọ m maka nke ahụ bụ…
Jenụwarị 22, 2013 na 5:29 PM
Ugbu a ị gawala ma mee ya Doug! I dee ederede ozo. Eji m obi dum na-aja gị mma maka ike gị iji rụzuo ihe niile ị rụzuru. Amaara m na m bụ otu n'ime ndị na-abụghị ndị na-enweta ego na-arịọ gị oge gị mgbe ụfọdụ ma kparịa gị banyere ike isi ike ijide. Mana m na-echekwa (olile anya) m na - eche na ịmara oge gị bara uru ma ọ bụghị ịmegbu gị banyere ya ma ọ bụ ijide iwe ma ọ bụrụ na ịlaghachikwute m. Ọtụtụ oge achọtala m azịza nke gị na ndị ọzọ amanyela m igwu obere ma mwakpu isi m na mgbidi ahụ oge ole na ole ruo mgbe m chọtara ihe maka onwe m na nke ahụ bụ nnukwu mmetụta.
Mụ na gị nwere usoro nhazi oge na ihe ndị anyị chọrọ. Ana m agbalị inyere onye ọ bụla jụrụ m aka dịka m nwere ike, mana m na-abịa ịghọta na otu n'ime ngwa njikwa oge kachasị mma m nwere na mkpịsị aka m bụ obere ojiji nke mkpụrụ akwụkwọ ozi abụọ, “Mba” .
Enwere m olile anya na m nwere ike ịchọta nguzozi n'ihe niile wee malite ịsị, "Enweghị m ike ugbu a, mana ka m gwa onye nwere ike inyere gị aka."
Jenụwarị 22, 2013 na 6:00 PM
Mba “olile anya” @jasonbean: disqus - mmekọrịta nke m wuru na mpaghara ahụ dị m mkpa. Ọ bụ netwọk nkwado gbakwunyere nke m na-adabere ma ya mere m na-atụ anya 'ịkwụghachi ya' mgbe mgbe! In nọ ebe ahụ!
Jenụwarị 22, 2013 na 6:16 PM
Na onye ozo-sir! Otu aka ahụ! Ọ bụ ihe dị ka oge maka anyị kwa ọnwa ngalaba-arụ ọrụ nnọkọ na St. Arbucks na-adịghị ka ihe na-eme ma kwa afọ! =)